Imba yeGoogle inopfuura kungoita internet-yakabatana mutauri ine izwi mubatsiri Iyo inoshandawo senge smart imba hub. Google Mubatsiri paGoogle Kumba kana yako Nest Hub inogona zvakare kudzora smart dzimba zvishandiso uye saka heino runyorwa rwezvakanaka zvishandiso zvaunogona kushandisa neGoogle Mubatsiri.
Google Mubatsiri matipi uye manomano: Tora mubatsiri wako Android
Smart thermostats haisi kungounza huchenjeri kuimba yako yekupisa, inoitawo kuti kupisa kwako kunyatsoita nekudzidza madiro aunoita imba yako ichidziya uye riini. Ivo vanovakira tembiricha yekugadzirisa pane paunenge uchizenge uri pamba uye nekudzora simba remarara nekuverenga kana iwe usiri mukati. Iyi njere inogadzira kuwedzera kukuru kune yako smart kumba setup.
Iwe unogona zvakare kudzora mamwe akachenjera thermostats ane Google Kumba zvishandiso - kugadzirisa tembiricha yeimba yako pasina chinhu asi izwi rako.
Best smart thermostat: Nest, Hive, Tado, Honeywell uye zvimwe
NaGoogle Mubatsiri paGoogle Kumba, unogona kushandisa izwi rako kudzora tembiricha mumba mako, shandura pakati pekushisa nekudzora nzira, nezvimwe. Izvo zvinoshanda ne Nest Thermostat, chigadzirwa chinobva kuGoogle-Nest Nest, inonyatso tengesa zvishandiso kunze kweizvozvo.
Kugadzirisa iyo tembiricha, iti "Itai kuti ive inodziya / inotonhorera" kana "Simudza / dzikisa temp" kana "Simudza / dzika temp madhigirii maviri" kana "Seta tembiricha kusvika ku72". Kuti uchinje kudziya kana kutonhora nzira, iti "Batidza kupisa / kutonhora" kana "Gadza thermostat kutonhora / kudziyisa" kana "Shandura thermostat kune inopisa-inotonhorera mode". Uye kumisikidza iyo modhi uye tembiricha, iti "Seta iyo kupisa kusvika ku68" kana "Seta iyo yekugadzirisa mhepo kuenda ku70".
Nest 3.0 wongororo: Iyo yakangwara kupfuura dzimwe dzose yakangwara
Nest Thermostat E kuongororwa: Iyo yakangwara, yakasarudzika, yekuzvimisikidza Thermostat
Nyaradzo Lyric T6
Imba yeGoogle inoshanda pamwe neiyo Yese Unganidzo Yekunyaradza mutsara we thermostats. Kana iwe uchida kushandisa Lyric thermostats, senge Honeywell Lyric T6R smart thermostat, iwe unozofanirwa kushandisa smart hub (seSmartThings) kubatanidza. Buda Google's FAQ peji kuti uwane rumwe ruzivo nezve kushandisa smart hubs neuchi huchi zvigadzirwa.
Ah, nemirairo yese yakafanana iwe yaunogona kushandisa neNest Thermostat zvakare shanda neHoneywell thermostats.
Honeywell Lyric T6R wongororo: Smart kutonhora kwakaitwa nyore
Iyo Netatmo Smart Thermostat ndeimwe yeanonyanya kusheedzera anotaridzika thermostat ataona. Ichi chigadzirwa hachivimbisi chete kushandisa 37 muzana mashoma simba mumba mako, asi zvakare inokutendera iwe kuti ubvise iyo nesimba kuburikidza nefoni yako, komputa kana izwi rako neGoogle Kumba.
Iyi thermostat yakagadzirirwa neakakurumbira wechiFrance dhizaina Philip Starck asi haisi chete maratidziro ayo anoita kuti zvionekwe. Iyi thermostat inokutendera iwe kugadzirisa yako yekupisa chirongwa kutenderedza hupenyu hwako. Kuisa tembiricha yakakwana yekuti paunomuka mangwanani, paunodzoka kumba kubva kubasa uye nezvimwe. Iyo inokutendera iwe kuongorora yako simba rekushandisa pamwe nekuidzora neApple Homekit, Amazon Alexa, Google Imba uye kunyangwe Facebook Messenger.
Tado inopa kuwirirana neGoogle Kumba futi. Iyo smart yekudziya system inoshanda ne geofeter, saka kana yaona kuti munhu wese abuda mumba inozvidzima. Ichatanga kuita chiito kana ichinge yaona mumwe munhu achiuya kumba uye ari mukati meiyo radius yakatsanangurwa.
Varidzi veGoogle Kumba vanokwanisa kudzora kudziyisa vachishandisa izwi ravo, kusanganisira kugona kudzora makamuri akazvimirira nekuda kweTado's smart radiator thermostats.
Kunze kwakanaka kamera kamera
Kudzora imba yako kudziya handiyo chete chinhu chaunogona kuita nezwi rako. Mamwe emakamera akanakisa epamba atakaona anosanganisira kugona kudzora nenzira dzakasiyana uchishandisa Google Imba.
Makanaka ekunze ekunze akangwara emakamera: Ona kunze kwemba yako chero nguva
Iko kweNetatmo Kuvapo ndeyekunakisa kwekunze chengetedza kamera iyo isingangochengeti ziso pamba pako, asi zvakare zvakapetana seye mafashama system system yekuvhenekesa nzira yako uye kudzivirira vashanyi vasingafarire.
Iyo kamera inodzivirira kamera, ine microSD kadhi yekuchengetedza uye dhizaini yakasimba. Iyi kamera yakangwara zvakare. Iyo inogona kuudza mutsauko pakati pevanhu, mhuka uye mota uye nekukuzivisa iwe kune izvo zvakadaro pafoni yako.
Iyo Netatmo Presence izwi rinodzora munzira dzakasiyana - chinonyanya kukosha chingave kugona kushandura mwenje wemafashama uri kure nezwi rako chete neGoogle Kumba.
Netatmo Kuvapo kwekutarisazve: Ipapo kubva pamuti wakashata uye wakananga mukati memwoyo yedu
Nest Cam IQ Kunze
Iyo Nest Cam IQ Kunze ndiyo yekupedzisira uye huru kwazvo yekuchengetedza imba yekuchengetedza kubva kuNest. Iyo munda wakakura wekutarisa, 4K sensor, 1080p kurekodha uye IP66 yakaiswa yedzimba inoita ichi chishandiso chakanyanya.
Ehe kuva chigadzirwa cheNest zvinowanzo shanda neGoogle Kumba zvishandiso futi. Iyo Nest Cam IQ Kunze inokutendera iwe kukanda mifananidzo kubva kamera yako kuenda kuterevhizheni yako kuburikidza neGoogle Chromecast. Zvese zvinodiwa mutemo uri nyore we "Hei Google, tamba (zita renzvimbo) kamera pane yangu Chromecast" uye hei presto, rwizi rwuri kubva kukamera yako ruri pachiratidziri chikuru.
Nest Cam IQ Kunze kwekuongorora: Kunze kwekuchengetedza kamera inowana huchenjeri
Arlo ndeimwe yeakakurumbira kuchengeteka kamera masisitimu, nekuda kwehuwandu hwakawanda hwezvigadzirwa zvinopihwa kune systemizable system, pamwe nekupa mahara kwemahara kuchengetwa kwemavhidhiyo kwemazuva manomwe, kwemamwe makamera mashanu.
Iyo Arlo Pro 2 inopa mabhatiri anodzoreredzwa kuitira nyore kuiswa uye 1080p kubatwa, saka iri yepakati yepakati-renji kamera system. Iko kune Arlo Ultra kune avo vanoda 4K. Arlo anozoona kufamba, ane chiratidzo cheusiku uye zvakare inopa ruzha kuona.
Arlo vs Arlo Pro vs Arlo Pro 2 vs Arlo Ultra: Ndeipi kamera yekuchengetedza yaunofanira kutenga?
Indoor smart imba kamera
Zvakare nekuona kunze kwemba yako, smart home camera inowanikwawo kuisa ziso mukati. Mamwe emakamera aya anoshandawo neGoogle Home, achivaita kuti vave nyore kudzora nezwi rako chete.
Akanaka kwazvo emukati kuchengetedza makamera 2018: Ona mukati meimba yako chero nguva
Kufanana nehama yayo yekunze, iyo Netatmo Yakagamuchirwa inenjere smart imba kamera isingade kunyoreswa uye marekodhi akananga kuMicrosoft kadhi Iyo zvakare inoratidzira otomatiki yehusiku yekuona maitiro, munhu kunyevera uye kumeso kuziva tech iyo inoita kuti iwe uzive vari kumba.
Iyo Netatmo Welcome inogona kuve inodzorwa nezwi kuburikidza neGoogle Kumba - ichikubvumidza iwe kukanda mifananidzo mhenyu kubva kukamera yakananga kune yako Chromecast-inogoneswa TV nyore.
Netatmo Kugamuchirwa kudzokorora: Big Hama iri kutarisa uye inoziva zvauri
Iyo Logitech Circle 2 yakanaka yekumba kamera ine zvakawanda zvekupa. Iyi kamera inopa 1080p kutenderera, nzira mbiri yekukurukurirana, otomatiki husiku hwekuona uye super yakaipisisa kona lens zvakare.
Iwe unogona kuwana makumi maviri-maawa anokosha emakumbo emahara kana kunyorera kuti uwane kune akawanda marekodhi kune kadiki pamwedzi mubhadharo. Denderedzwa 24 zvakare rinochinjika neGoogle Kumba. Na mamwe mazwi ari nyore kuraira, unogona kutenderera mutserendende paTV yako zviri nyore pamwe nekuita mamwe marongero akasiyana siyana.
Logitech Circle 2 ongororo: Yakanakisisa yekuchengetedza imba kamera?
Nerubatsiro rwema smart plugs, kunyangwe iyo yakakosha midziyo yemagetsi inogona kupihwa humwe huchenjeri. Iyo smart plug inogona kukubvumidza iwe kuseta marongero ezvinhu zvekuvhura kana kudzima - zvichikubvumidza iwe kuti uite zvinhu zvine hungwaru senge kuve unoshanda zvakanyanya nesimba rako kana kuwana mwenje kubatidza pane imwe nguva yezuva. Mikana yacho inoshamisa, asi zvakanyanya kana uchigona kudzora iwo mapuragi nezwi rako.
Akanakisa smart plugs 2018: Google, Alexa uye Apple HomeKit kutonga
Kana iwe ukadhizairira hub inoenderana (zvakare, seSmartThings), iyo yese WeMo yemhuri yemidziyo inogona kudzorwa kuburikidza neGoogle Kumba. Vako vasina hubvu vanozoganhurirwa vashoma vakangwara plugs uye switch. Zvishandiso pachazvo zvakangwara, asi kukwanisa kudzora plugs nezwi rako chete rakanaka. Zvakanaka Google, vhura kofi kepe.
TP-Link ndeimwe kambani inopa smart plugs inoshanda kwete nechero smartphone yako chete asi neAmazon Alexa uye Google Midziyo Midziyo. Chishandiso chiri nyore-kushandisa chinoitwa nyangwe chiri nyore kudzora nezwi rako nerubatsiro rweyako waunoda izwi-mubatsiri. The TP-Link zvishandiso zvinowanzo kuderedzwa, saka zvakanyatsokodzera kubata muPrime Day kana Black Friday kutengesa.
Smart mwenje uye mwenje mababu
Smart mwenje kuwedzera kwakajeka kumba kwako - zvichikubvumidza iwe kumisikidza mwenje kuti uuye pane dzimwe nguva dzezuva, shandura mavara uye kupenya kubva pafoni yako uye nezvimwe zvakawanda. Mimwe michina yekuvhenekera smart inodzora kuburikidza neGoogle Imba zvakare kuvhura nyika yezvingangoita uye yakanakisa nyore.
Kwakanakisa kuchenesa kwakanaka: Philips Hue, IKEA, Osram uye zvimwe
Philips Hue Mwenje
Unogona kushandisa izwi rako kudzora mwenje wePhilips Hue wakakomberedza imba yako pasina kubata switch. Iwe une kugona kudzima kana kudzima mwenje mukati meimba, pamwe nesarudzo yekugadzirisa kupenya kwavo. Iwe unogona kutaura zvinhu senge "Batidza "," Deredza iyo "," Penya iyo "," Set kusvika ku50 muzana ”,“ Tendeuka green ”, nezvimwe.
Philips Hue yakakwana kuongorora system
Nanoleaf smart taa panels
Nanoleaf inopa yakajairwa mwenje mhinduro yakagadzirwa inobatanidza mapaneru ayo anotsigira mamirioni gumi nematanhatu .. Aya mapani emagetsi anovhenekera haangogone kudzorwa nekugadziridzwa neyakaenderwa neapp, anokwanisawo kuvhurwa nekudzimwa nekugadziridzwa neGoogle Home futi.
Chii chinonzi Nanoleaf?
Kutenderera zvimiti nemabhokisi
Ne plug iri nyore uye yekutamba, unogona kuona zvakasiyana-siyana zvemavhidhiyo paterevhizheni yako uye wobva watochinja kunyange zviyero zveterevhizheni kuita smart zvishandiso. Kune huwandu hwengwaru dzekutenderera zvakangwara zvinowanikwa uye zvimwe zvacho zvinoshanda neGoogle Home futi.
Ndeipi yakanyanya media media inoturikira iwe? Fire TV vs Apple TV 4K vs Chromecast vs Roku
Zvinogona kuita senge zviri pachena sezvo chiri chigadzirwa cheGoogle, asi Chromecast inoenderanawo neGoogle Imba. Unogona kushandisa yako Google smart mutauri uye mubatsiri kukanda vhidhiyo kune chero terevhizheni ino inoyerera chishandiso chakabatana.
Izvi zvinoshanda neNetflix, YouTube uye mazhinji mamwe masevhisi. Iyo yakanaka nzira yekukanda zvirimo zviri nyore. Iwe unogona zvakare kubvunza Google kumbomira, kutamba uye kudzorera zvakare. A akasiyana emirairo yezwi ita kuti utore iyo TV iri kure kuti uwane zvemukati chinhu chekare.
Imba yeGoogle inoshanda nezvose zvakasiyana zveChromecast zvakare - Chromecast Audio, Chromecast Ultra uye kunyangwe iyo yekutanga Chromecast.
Google Chromecast Ultra ongororo: 4K kukanda kwakaringana ... asi haina musoro
Chromecast 2 ongororo: Ita chero TV ive yakanaka, pasina simba
Roku kutenderera zvishandiso
Roku agara kwenguva refu ari mumwe wevanofarira ficha vagadziri kana zvasvika kuyerera matanda nemabhokisi. Kuwanika mukana wekusiyana-siyana zvemukati zviri nyore kunoita kuti zvigadzirwa izvi zvinakidze. Dzazvino kudzokorora zvinoreva kuti wave kugona kudzora zvirimo kuburikidza neGoogle Kumba zvakare, chinova chimwe chikonzero chekutenga.
Roku Kutambanudzira Stick + wongororo: Kutanga-kirasi kutenderera
Roku Express wongororo: Iyo inodhura uye iri nyore nzira yekuwana vhidhiyo-pane-kudiwa
Robhoti yekuchenesa vanochenesa-vanotumwa naMwari kana zvasvika kurerutsa nhamo yekuchengeta imba yako yakachena. Automated vacuuming inoita nyika yemusiyano uye pane chimwe chinhu chakanakisa nezve kuita robhoti ita yako kubhidha. Chikamu chakanakisa ndechimwe cheaya mabhoti anogona kudzorwa nezwi rako nekutenda kuGoogle Imba futi.
Best robhoti vacuum cleaners 2018: Nei yako yekuchenesa?
Haasi ese ekuchenesa marobhoti akaitwa akaenzana uye kugona kwaRoomba i7 + kurasa tsvina yayo. Inopa hunyanzvi hwekuchenesa uye mepu, pamwe nekushanda neGoogle Mubatsiri. Iyo yakati kurei kupfuura vamwe uye kwete yakanyarara, asi iine hunyanzvi hushoma.
iRobot Roomba i7 + wongororo: Kusiyanisa neokuzvitakura tsvina
Neato Robotic Botvac D7
Iyo Neato Botvac D7 imwe yakangwara uye yakabatana robhoti vacuum yakachena ine zvakawanda zvekupa. Iyo ine huchenjeri hwekugadzira mepu, hwakawanda-pasi zvigadziro uye hwakazara izere nemanzwiro ekubatsira iko kutenderera pamba pako. Takawana iyo Botvac D7 iri yakanaka yekuchenesa mudziyo, yakagadzirwa zviri nani nekuwedzera kwekuyenderana neGoogle Home.
Uchishandisa izwi rako unogona kutumira iyo robhoti kuti ichenese, tarisa huwandu hwayo hwebhatiri, udzorere iyo kuchavha dock nezvimwe.
Zvimwe zvinoshandiswa neGoogle kumba zvinowirirana
Imwe Nest mudziyo iyo inoenderana neGoogle Kumba ndeye Nest Hello vhidhiyo bhero. Chigadzirwa chepamusoro chinopa 160-degree, 1600 x 1200 HD, 30 FPS maonero emusuwo wako wepamberi. Iine 8 x digit zoom, mutauri wepamusoro uye maikorofoni uye IPX4 mamiriro ekunze ekupesana, iyi vhidhiyo yemabhero inogadzira nzira yakanaka kune mhete.
Kune varidzi veGoogle Kumba, zvinoratidzwa zvichave zviziviso kwete chete zvekuve kune mumwe munhu pamusuwo, asi kuti ndiani zvakare. Paunenge uchinge wadzidzisa Nest Mhoro vanhu ndiani, ichazivisa kuvepo kweshamwari nemhuri pamusuwo wepamberi kuburikidza neako Google Home mutauri. Akashambidzika eh?
Sezvakaita nemamwe makamera, iwe unogonitawo castage shambadziro kune yako TV zvakare.
Nest Mhoro kudzokorora: Pakupedzisira, vhidhiyo musuwo wekutora paRin
Arlo Audio Doorbell vs Nest Hello vs Ring Vhidhiyo Masuo: Ndeupi mutsauko?
Kuzvidzokorora Wave Mini mweya wemhando yekutarisa
Kana iwe uchinetseka nezve rucheno rwemhepo mumba mako, zvine chekuita nehupfu nemakemikari, matambudziko neradon uye nezvimwe ipapo Kuzvarwa Wave Wave Mini zvingave zvako. Ichi chiitiko chidiki chinogara mumba mako, chinyararire kutarisa mweya wako uye zvakatipoteredza kuti uve nechokwadi chekuti zvese zviri pamusoro-notch.
Iwe unogona kuwana iyo data yakananga pafoni yako neiyi nzira inosangana nayo, asi iwe unogona zvakare kushandisa yako Google Kumba seseji. Kuzvara kune Unyanzvi hweGoogle Mubatsiri izvo zvinoita kuti iwe "utaure" kune mudziyo kuti utarise mhando yemweya, tembiricha yemukamuri uye nezvimwe nemirairo yezwi yakapusa. Sebhonasi yakawedzerwa inoenderanawo ne Alexa zvakare.
Samsung Smart Zvinhu
Kutaura nezveSmartThings, mhuri yeSamsung yemidziyo yemumba yakangwara inopa kuenderana neGoogle Imba. Izvo zvinosanganisira akati wandei smart mabhalibhu, aunogona kuvhura uye kudzima, kupenya, uye kudzima, pamwe neinofamba inzwa, iyo inowirirana ne IFTTT kuitira kuti ugone kunyatso simudza imba yako otomatiki. Kana zviri zveSmartThings hub, inovhura Google Kumba kusvika kune zvimwe zvakabatana zvishandiso.
SmartThings hub zvishandiso shanda nemhando dzakasiyana siyana dzezvigadzirwa zvemumba zvakangwara kubva pamhando dzakadai sePhilips, Osram, Leviton, Honeywell, uye Ecobee, uye nekuti Google Imba inoenderana nepuratifomu iyi, inova nechokwadi chekuti vashandisi veSmartThings vane sarudzo isiri yeEcho yemubatsiri wemba akachenjera uye mutauri mudziyo. Zvese iwe zvunofanirwa kuita kutaura kuti "Ok Google" kuti musone kubatidza mwenje, gadzirisa thermostats, nezvimwe.
Moodo smart kumba kunhuhwirira diffuser
Nakidzwa nokuzadza imba yako nezvinonhuwira zvakanaka, asi tsvaga yakasarudzika madziro-plug shanduro zvishoma isinganetsi? Zvakadiniko neyemazhinji-anonhuhwirira diffuser aunogona kudzora nezwi rako kuburikidza neGoogle Kumba kana Amazon Alexa? Kana izvo zvinonzwika zvakanaka, saka Moodo ndeyako. Iri bhokisi diki raunogona kutakura nezvakasiyana zvinonhuhwirira kuburikidza ne nyore mwedzi kunyoreswa sevhisi.
Izvo zvinofambidzana neapp zvinokutendera kuti ubatanidze zvinonhuwira, sanganisa flavour kana kutarisa kune mumwe munhu kuravira. Inofambiswa nevane makumi mashanu mafeni ayo anotendera iwe kukurumidza kuzadza kamuri (kana makamuri akati wandei) nekunhuwirira kunofadza kana zvishoma nezvishoma uye chinyararire unzwe kunhuwirira kwakanaka zuva rese. Zvikamu, zvakatarwa nguva uye "zvinobudirira" zvirevo zvinoreva kuti iwe unogona kushandisa zvakanyanya sisitimu ino kuona kuti imba yako inonhuwirira zvakanyanya kana iwe uchidzoka kumba uchibva kubasa kana chete kwezuva rese.
Iko kugona kudzora akasiyana marongero nezwi rako chete irowo rakajeka bhonasi ratinofarira kushandisa. Iwe unogona zvakare kuzvidzora munzira dzakawanda kuburikidza neGoogle Kumba - kwete kungozvimisa nekudzima, asi kugadzirisa fan fan, kuisa zvimwe zvinonhuwira uye zvimwe.
Logitech renji reHarmony zvishandiso zvatove zvakatosimbiswa semidziyo yekudzora dzimba. Kunyangwe vasina izwi rekudzora, vanogona kushandiswa kudzora mhando dzese dzezvinhu zvine hungwaru, unogona here kugadzira 'mapepa' uchishandisa IFTTT.
Semuenzaniso, iwe unogona kuseta 'yakanaka mangwanani' nzira iyo ichavhura ako mapofu, chinja pane yako kofi muchina uye shandura yako TV kune yakatarwa chiteshi.
Imba yeGoogle parizvino haitsigire yese sevhisi inoitwa naHarmony, saka ikozvino nemasevhisi maviri achibatanidza, unogona kuhukura mirairo yezwi sekuti "Ok, Google, bvunza Harmony kuti ndibatidze yangu yakanaka mangwanani chiitiko".
Isu tinonakidzwa nekushandisa Google Kumba neHarmony pamwechete kudzora terevhizheni. "Ok Google, vhura TV", "Ok Google, dzora terevhizheni" nezvimwe. Sevhisi iri kuramba ichivandudza zvakare.
Rondedzero yemidziyo inoenderana neGoogle Kumba ndeye nguva dzose kuwedzera. Tichave tichivandudza iyi runyorwa apo isu tichiisa maoko edu pane zvimwe, saka ive shuwa yekutarisa kumashure kuti uone zvimwe zvinowanika mune ramangwana. Iwe unogona kuona zvimwe zvekuita mune yedu smarthome setup vhidhiyo pazasi:
Wana zvakanyanya kubva kune idzi smart zvishandiso uye masevhisi neGoogle Mubatsiri
Akanaka kwazvo emukati kuchengetedza makamera 2020: Ona mukati meimba yako chero nguva
Nest Cam Kunze vs Nest Cam IQ Kunze: Ndeupi musiyano?
Chii chiri Google Imba, Imba Max, Nest Mini, Nest Hub uye Nest Hub Max uye chii chavanogona kuita?
Google Nest Hub Max vs Nest Hub nyowani: Misiyano yakatsanangurwa